Showing १-१० of ४५४ items.
मधुशालाका मधुप्यालाः प्रविधिले पुस्तकलाई प्रतिस्थापन गर्दैन
धरानको भानुचोक बसपार्कदेखि दक्षिणपट्टि झण्डै १५० मिटर तल झर्नुहोस् र दक्षिणपट्टि फर्केर हेर्नुहोस्, त्यहाँ भेटिन्छ मधुशाला । मधुशाला एउटा ‘चियालय’ हो । चिया पिउँदै पुस्तक पढ्न प्रोत्साहन गर्ने मधु दाइ छन् त्यहाँ । दुई दशक अघिदेखि मधुशाला अर्थात् चियालय स्थापना गरेर पठनसंस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्दै आएका मधुप्याला उर्फ मधुकर शाक्यका कुरा हामीले सुनेका छौं । र तपाईंसामु उनका अनुभूति बाँड्ने प्रयत्न गरेका छौं । ********१६–१७ वर्षको उमेरदेखि साहित्य सिर्जना गर्न थालें । त्यतिखेर पत्रपत्रिकामा हुलाकमार्फत् रचना पठाउँथें ।श्रीमान् सम्पादकज्यूफलाना पत्रिका ...महोदय, मैले एउटा कविता प्रेषित गरि
प्रकाशित मितिः बैशाख ११, २०७८
मोतीराज सुनुवारको सांगीतिक यात्राः ५८ वर्षको उमेरमा पहिलो गीत
मैले गीत बजारमा ल्याइरहँदा, मेरो राजनीतिक जीवनलाई हेर्दा, मजदुर संगठनसँग जोडिएको मेरो आन्दोलित जीवनलाई हेर्दा, फेरि मान्छेहरुले त्यसलाई दाँजेर हेर्दा, धेरैले भनेः यो गीतसंगीतमा कसरी लाग्यो ? मोती सुनुवार कसरी गायक भयो ? बडो कौतूहलताको विषय भयो । मानिस राजनीति पनि गर्छन् । सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि लाग्छन् । त्यो उमेरको कुरा पनि हुन्छ । मैले वास्तवमा पहिलो गीत ५८ वर्षको उमेरमा रेकर्डिङ गरें । यसो केलाएर सुन्ने हो भने माया–प्रेमका शब्दहरु छन् । मान्छेहरुले भनेः बुढा मान्छे कतै प्रेममा पो फस्यो कि ? राजनेताहरु धेरैको नाम प्रेम र रतिरागमा जोडिएको छ । कोसँग जोडिएर को आइरहेको छ । मोती
तुलसी दिवसलाई देवकुमारी थापा स्मृति पुरस्कार
लोक साहित्य र संस्कृतिका स्रष्टा तुलसी दिवसलाई विराटनगरमा बिहीबार ‘बबरसिंह देवकुमारी थापा सेवा गुठी’ ले सम्मानित गरेको छ । स्रष्टा दिवसलाई ‘देवकुमारी थापा स्मृति पुरस्कार’ बाट सम्मानित गरिएको हो । पुरस्कारको राशि नगद ५१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । स्रष्टा दिवसले करिब ६ दशकदेखि नेपाली लोक साहित्य तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका छन् । गुठीले उक्त पुरस्कारबाटै कवि मेघराज मञ्जुललाई पनि बिहीबार नै पुरस्कृत गरेको हो । उनलाई गत वर्षको पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको गुठीका अध्यक्ष कविराज न्यौपानेले जानकारी दिए । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएपछि कार्यक्रम गर्न अस
आबाले जुत्ता खोलिदिंदाः जेबी खत्री
२०६३ साल असार–साउनतिर हुनुपर्छ । त्यतिबेला म इजरायल पुगेको भर्खर एक–डेढ वर्ष भएको थियो । रेबायाबाट राहात गएको थिएँ । यो बेरसेवा नजिकैको एउटा सानो सहर हो । नजिकै ग्रीन हाउसहरु थिए । गुलावको फूलमा काम थियो । एक्सपोर्ट थियो । सबै युरोप र अमेरिका जाँदो रहेछ । राहातमा नेपाली म एक्लै थिएँ । वरपर पनि नेपाली कोही नजिक थिएन । नेपाली बोल्न पनि साथीसँग फोनमा मात्र पाइन्थ्यो । नत्र नेपाल घरमा फोन गर्दा । त्यहाँ त थाइल्याण्डका र प्यालेस्टाइनीहरु मात्र थिए । प्यालेस्टाइनीहरु आफ्नो देशबाट भागेर आई त्यहाँ लुकेर काम गर्ने गर्दा रहेछन् । उनीहरु सबैलाई इजरायलमा काम गर्ने अनुमति हुँदोरहेनछ ।म एक्लै भएकोले खाना पक
गायक पृथ्वीमान लिम्बुको ‘आदङ्बे’ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजानिक
विराटनगर । गायक पृथ्वीमान लिम्बुले आफ्नै शब्द तथा स्वर रहेको ‘आदाङ्बे’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नयाँ वर्षको अवसर पारेर उक्त गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजानिक गरेका हुन् । गायक लिम्बुले यसअघि पनि पुर्वेली लोक भाकाको ‘‘मिरमिरे विहानी’ बोलको म्युसिक भिडियो सार्वजनिक गरिसकेका छन् । लिम्बु पेशाले राष्ट्रसेवक भएतापनि आफ्नो बचेको समयलाई गीत, संगित, साहित्य, कला र समाजसेवामा समर्पित गरेका छन् । गीतको भिडियोमा लाहुरे संस्कृति भित्रको माया, प्रेम, मिलन र विछोडलाई देखाइएको छ । गीतको भिडियो निर्देशन दिनेश माङ्मुले गरेका हुन् । भिडियोमा गायक पृथ्वीमान,
जेफाले साहित्य उत्सवका आयाम
नागबेली सडक पार गर्दै मोरङको पर्यटकीय क्षेत्र जेफाले पुग्नेहरुका लागि जेफाले एउटा भ्यूटावर मात्रै हो भन्ने आभास हुन सक्छ । मोरङको केराबारी गाउँपालिका–२ मा पर्ने यो पर्यटकीय क्षेत्रले केही वर्षयता नयाँ आयाम भिœयाइरहेको छ । त्यो आयाम हो, साहित्यिक सिर्जना उत्सव । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट केराबारी बजार हुँदै जाँदा करिब ४२ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने यो डाँडाले पर्यटक तान्न थालेको धेरै वर्ष भएको छैन । धरानबाट भने ४५ किलोमिटर यात्रा तय गरेपछि पुगिने जेफाले भ्यूटावरले साहित्यिक सर्जक पनि जन्माइरहेको छ भन्दा सायद गलत नहोला । भ्यूटावरबाट सेताम्मे हिमशृङ्खला र तराईका समथर फाँट नियाल्दा एकपटक मुग्ध नुहन
पुष महिनाको बेलुकीको घामको स्पर्शले धर्तीलाई सुम्सुम्याएर सूर्य भर्खरै स्वयम्भु पारिको डाँडाबाट ओझेल प¥यो । सडकछेउमा आफ्नो ठेलागाडीलाई अड्याएर घामको न्यानो पाहार ताप्दै आफ्नो दुवै हत्केलालाई सिरानी हालेर सुतिरहेको धनेको शरीरले अब भने जाडोको महसुस गर्यो । बतासिँदै आएको हावाको एउटा चिसो झोंक्काले ऊ ब्युँझियो । उसको ब्युँझाइसँगै नजिकैको सेकुवाघरबाट आएको सेकुवा पोलेको कोइलाको धुँवा र मासुको गन्धले उसको नाकलाई एकपल्ट बेस्सरी गिजोल्यो । उसको पेटभित्र भोक उछित्तोसँग खेल्यो । भोकले अमिल्लिएर उसको अनुहार सोहोरियो, बेस्वादले ।उसले एकचोटि वरिपरि नियाल्यो र सडकको परपरसम्म आफ्ना आँखाहरुलाई हुत्यायो । बेलुक
स्वाभिमान किन झुक्दैनस् ?
झुकाएरै कतिले लुट्नु लुटे,टँसाएरै कतिले चुस्नु चुसे ।घुनले भित्र भित्रै सके झैँयहाँ खोक्रो पारिसके ।देश दुब्लाएर के भो र १सब् भरभराउँदा, मोटाघाटा भईसके ।अस्ति चप्पल फट्काएर हिडनेहरु,आज कत्रा पदहरु हत्याईसके ।हिजो दुई छाक धान्न गार्हो हुनेहरु,कुम्ल्याएर अकुत सम्पतिआलीशान महल ठड्याईसके ।तर,तेरो फोस्रो आडम्बर चाहिँ जिउकोत्यू छ ।कहिले थाक्छस् रु कहिले बद्लिन्छस् ?स्वाभिमान१ तँ चाहिँ किन झुक्दैनस् ?चाप्लुसी कत्ति सिकाए यसलाई ।बोली पिच्छे ज्यू, हजुर भन्न लगाए ।शरीर नै थर्थराए झै,अभिनय गर्न पनि सिकाए ।हाकिमको अघाडि पछाडि गर्न पठाए ।लाज, घिन, शरम सब दबाउन लगाए ।तर अचम्भ ! अ
प्रकाशित मितिः चैत्र २६, २०७७
मेजर अमरबहादुर सिंह राई कारगिल युद्धबाट फर्किएर महेन्द्रनगर चक्रघट्टीको सैनिक प्लटमा सानो खाँबा गाडेर टिनको छाना लगाएर एकतले घर बनाएर बसेका थिए । उनको पक्कीघर बनाउने सोच पनि थियो । उनकी श्रीमती भरखरकी थिइन् । छोरा–छोरी भएका थिएनन् । विवाह गरेर उनी फेरि पल्टनमा जान्छन् । पल्टनबाट २ वर्षपछि कारगिल युद्ध लडेर नेपाल आउँछन् । उनको थलो दिङ्ला हो । नेपाल फर्केर हालको घरमा बस्न थालेको पनि एक वर्ष हुन लागेको थियो । अमरसिंह राईले घरबाट पूर्व कालापानीमा १ बिगाहा खेत लिएका थिए । त्यो आफै खेती गर्दथे । खेतीको समयमा उनी दिनभरि मेलापातसँग हुन्थे । बालिनाली थन्क्याएर केही दिन बाबु–आमासँग भेटघाट गर्न दिङ्ला जा
मास्टर चक्रबहादुरको नेस्टाल्जियाः आम मानिसको कथा
विश्वका महान् मानिसहरुका जीवनी र आत्मकथाहरु सार्थक जीवनका लागि प्रेरणादायक हुन्छन् । त्यस्ता आत्मकथाहरु मैले भने धेरै पढेको छैन । मेरो लागि आत्मकथाहरु कथात्मक शैलीमा अभिव्यक्त संस्मरण रुचिकर रहँदै आएका छन् । महान् कहलिएकाहरु मात्र होइन, सामान्य जीवन व्यतित गरेका आम मानिसको पनि समाज र सभ्यता निर्माणमा कुनै न कुनै रुपमा योगदान हुन्छ । यसअर्थमा मानिसको जीवनी तथा आत्मकथा समकालीन कालखण्डको इतिहास हो ।मास्टर चक्रबहादुर पालुङ्वाको आत्मकथाका साथै उनको जीवनी समेटिएको पुस्तक ‘चक्रको युगको चक्र’ किताब यस्तै आम मानिसले भोगेको इतिहास हो । आफू नभएको, आफैले नभोगेको, अनुभूति नगरेको समय, ठाउँ र परिस्थितिको भोग